Vaovao - Melody 2021 Fahatongavana ao an-trano Krismasy Village Village Jiro haingon-trano / Fetin'ny fialantsasatra / haingo anatiny
Trano haingo LED any an-tanàna any amin'ny tanànan'ny Krismasy / Fanomezana fialantsasatra / haingo anatiny
Haingo Krismasy amin'ny trano: Ny jiro LED miloko dia marevaka sy mamirapiratra, izay manintona tokoa toy ny haingon-trano fialantsasatra. Ny mozika falifaly dia tena mety amin'ny atmosfera fety.
Haingon-trano takelaka multifunctional: Ity haingo Krismasy ity dia tena mety amin'ny tranonao, toeram-piasana, latabatra fidirana, peratra, na ivon'ny latabatra fisakafoana, manampy ny rivo-piainana fety.
Fanomezana fialantsasatra tsara indrindra: Ity dia fanomezana Krismasy avo lenta sy maivana ary tonga lafatra. Izy io dia mety amin'ny ankizy, namana na amin'ny famoriam-bola. Ny mozika falifaly, jiro mamirapiratra ary seho Krismasy velona dia mahatonga ny Krismasy mangatsiaka feno hafanana.
Dynamic, Light, ary Mozika
Jiro miloko, lamasinina mihodina ary mozika krismasy falifaly dia mamorona atmosfera fety matanjaka ary manampy rivo-piainana mahafinaritra amin'ny fetibe ho avy.
Ny habeny dia antonony ary azo apetraka eo amin'ny birao, dome, latabatra fisoloana akanjo, latabatra eo am-pandriana. Mora ny mitahiry sy mandamina rehefa tsy ampiasaina, ary tsy mitana toerana.
Mampiasà bateria 3AA (Tsy tafiditra) hamatsiana herinaratra. Izy io dia miasa eo ambanin'ny fepetra malefaka ambany (4.5V), izay azo antoka kokoa. Tsy mila miahiahy momba ny fikorontanan'ny herinaratra avy amin'ny ankizy na ny biby fiompy ianao.
Ry mpividy malala, noho ny vokatry ny jiro, ny famirapiratan'ny monitor, ny fandrefesana azy amin'ny tanana, sns., Mety misy fahasamihafana kely eo amin'ny loko sy ny habe eo anelanelan'ny sary sy ilay entana tena izy. Manantena am-pahatsorana fa azonao izany! Misaotra anao.